Shabab oo deegaano kale laga saaray |
Shabab oo deegaano kale laga saaray
celebrex without prescription, purchase clomid. Warka naga soo gaarayo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose, ayaa sheegaya in Ciidamada Maamulka KMG Jubba ay si buuxda ula wareegeen deegaano hoostaga Jubbada hoose.
Ciidamada Jubba ayaa la sheegayaa in deegaanadaasi ay kula wareegeen dagaal qaatay ku dhawaad Afar saac, kaasi oo kala dhexeeyay Maleeshiyada Alshabaab.
Afhayeenka Maamulka KMG Jubba Cabdinaasir Seeraar Maax oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Saddex qof oo Al-Shabaab ahaa ku dileen dagaal, islamarkaana ay kula wareegeen deegaano dhowr ah oo ay ka arimin jireen Alshabaab.
Waxa uu sheegay in Ciidamada Maamulka Jubba ay gacan ku haynta deegaanka Biroole oo 50 km dhinaca galbeed uga beegan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose ka qabsadeen Maleeshiyada Alshabaab.
Seeraar ma uusan sheegin Khasaaraha kasoo gaaray dagaalka Ciidamada Maamulka Jubba.
Dhanka kale, Deegaanka Biroole ayaa ah deegaan muhiim u ah isku xirka gobollada Jubbooyinka iyo gobolka Waqooyi-bari Kenya, waxayna Al-Shabaab gacanta ku haysay shantii sano ee la soo dhaafay.